Ngọnarị - Quotes Pedia
Anyị niile chọrọ mkpali na agbamume iji bie ndụ anyị niile. Olile anya na olileanya na - enyere anyị aka ile anya ma mee ka anyị na - agagharị. Ebumnuche na enyere anyị aka itinyekwu onwe anyị ma were obi ike chere nsogbu aka. Ọ na - enyere anyị aka ịkwali ma nwee ọmịiko na ndị ọzọ na - enwe nsogbu na ndụ ha.
Greatzọ dị mma inye onwe gị mkpali a chọrọ bụ na a na - aga site na nchịkọta nke mkpali na ezi okwu. Ihe ndị mmadụ kwuru na-eziga ya n'ụzọ ziri ezi ma nwee ike ịnagide ya. Ọbụladi mgbe ihe dị mma, mkpụrụedemede bara uru na-akụziri gị ijide obi ụtọ gị nke ọma ma nwee ekele maka ihe anyị nwere.
Quotespedia.org bụ nnukwu ebe iji chọgharịa maka nhota ndị na-amasị ụdị ndụ niile. O nwere nchịkọta nke ndị mmadụ kwuru site n'ụdị ndụ niile ị ga - eche. Ihe ndị na-ekwu okwu nwere ike ịmasị onye dị afọ iri na anọ, ọ nwekwara ike ịgba nwatakịrị dị afọ iri isii na ise ume n'ihi na ihe ndị ae kwuru na-enweghị oge ma baa uru.
Weebụsaịtị ahụ ga - enyere gị aka ịchọ okwu wee mepee gị ka nwee nnukwu nchịkọta nke ndị mmadụ kwuru n'ụwa niile n'isiokwu ahọpụtara. Yabụ, nọgidesie ike na nyocha, nweta mmụọ nsọ ma na-akpali ndị ọzọ!
Ọ bụrụ n’ịchọta ihe ọ bụla ịchọrọ idetuo na / ma ọ bụ jiri ya na blọọgụ gị / webụsaịtị ma ọ bụ ebe ọ bụla, ọ ga-abụ ụdị mmeghachi omume igosipụta weebụsaịtị a.
Biko gụọ nlepu anya nyochaa nke a tupu i tinye weebụsaịtị a.
Hụ kwa Quotespedia.org Okwu nke Service na amụma nzuzo.
Nkwupụta a na-achịkwa ojiji nke Quotespedia.org. Site n'iji websaịtị a, ịnabata disclaimer a n'uju. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na akụkụ ọ bụla nke mgbagha a, n'ụzọ obiọma ejikwa Quotespedia.org ma ọ bụ weebụsaịtị, akụrụngwa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla nwere njikọ. Anyị debere ikike ịgbanwe usoro ndị a n'oge ọ bụla. I kwesịrị, yabụ, na-eleghachi oge oge maka mgbanwe. Site n'iji webụsaịtị a mgbe anyị biputere mgbanwe ọ bụla, ị kwenyere ịnabata mgbanwe ndị ahụ, ma ị nyochala ma ọ bụ na ịgaghị.
Esere onyonyo ejiri ya na Quotespedia.org sitere na webụsaịtị, ndi enyi, na ndi okacha amara, nweghariri, ha kwenyere na ha di “n'oha obodo”. Anyị na-anakọta ha, tụgharịa ha ma tinye ya na veranda. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ikike okike ọ bụla ma chọọ iwepu ya biko zitere anyị email na anyị ga-ewepụ ya n'otu n'otu.
Ihe ndị e hotara na webụsaịtị a bụ naanị maka ebumnuche mmụta na nke mkpali ma dị maka ojiji nkeonwe ya bụ n'efu. Enweghị ego zoro ezo gụnyere mgbe ị na-ebudata ha.